Bokin' ny Ekleziastika - Wikipedia
Bokin' ny Ekleziastika
(tonga teto avy amin'ny Fahendren'i Bena Siràka)
Ny Bokin' ny Ekleziastika na Fahendren' i Bena Siràka dia boky ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly katôlika sy ôrtôdôksa izay voasokajy ho isan' ireo bokim-pahendrena. Ny lohahevi-dehiben' ny boky dia ny Fahendrena izay anaovan' ny mpanoratra fitanisana ohabolana sy famelabelarana voalamina. Ny fatahorana an' Andriamanitra no fisehoan' izany Fahendrena izany. Izany dia nataon' ny mpanoratra mba hanoherany ny fihanaky ny kolontsaina grika (indrindra ny filôzôfia) izay mila hanototra ny kolontsaina sy ny fivavahana jiosy nolovana tamin' ny razana. Ny Fahendrena dia sady reny no vady no anabavy ka ny fikatsahana azy dia fikatsahana an' Andriamanitra ary ny fiainana miaraka aminy dia fiainana miaraka amin' Andriamanitra.
I Jesoa zanak' i Siràka (hebreo: Yeshua ben Sira) no atao hoe nanoratra an' io boky io tamin' ny fiteny hebreo. Ny zafikeliny no nandika an' ilay boky ho amin' ny fiteny grika.
Ny Jiosy ny ny Prôtestanta dia tsy manao an' io boky io ho kanônika fa mihevitra azy ho tsara vakina ihany.
Ny Bokin' ny Ekleziastika dia atao hoe koa Fahendren'i Bena Siràka na Fahendren' ny zanak' i Siràka izay hafohezina amin' ny hoe Siràka. Ny anarana hoe Siràka dia mety ho hita amin' ny endrika hoe Sirà. Ao amin' ny Volgata io boky io dia atao hoe Liber Ecclesiasticus na Liber Iesu filii Sirach ("Bokin' i Jesoa zanak' i Siràka"). Amin' ny teny hebreo izy dia atao hoe ספר בן סירא / Sepher ben Sira ("Bokin' i zanak' i Sirà").
Sarotra zaraina ny boky nefa azo atao ny mizara azy ankapobeny ho telo:
Fananarana (Sir. 1.1 -- 42.14)
Ny voninahitr' Andriamanitra manerana ny tany sy ny lanitra (Sir. 42.15 -- 43.33)
Ny Fahendren' Andriamanitra teo amin' ireo Hebreo fahizay (Sir. 44.1 -- 51.30)
Boky ao amin' ny Ketuvim ao amin' ny Baiboly hebreo: Salamo - Ohabolana - Jôba - Tononkira Fanaperana - Rota - Fitomaniana - Mpitoriteny - Estera - Daniela - Ezra-Nehemia - Tantara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Ekleziastika&oldid=1041857"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 03:01
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 03:01 ity pejy ity.